पुडासैनी प्रकरणमा रविको बारेमा चितवन जिल्ला अदालतमाले गरेको निर्णयलाइ उल्ट्याउदै उच्च अदालत हेटौंडाले रवीको बारेमा गर्यो यस्तो निर्णय ! – Etajakhabar
पुडासैनी प्रकरणमा रविको बारेमा चितवन जिल्ला अदालतमाले गरेको निर्णयलाइ उल्ट्याउदै उच्च अदालत हेटौंडाले रवीको बारेमा गर्यो यस्तो निर्णय !
काठमाडौं– उच्च अदालत हेटौंडाले टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ। उच्च अदालतले बिहीबार रवि र सरकारी पक्षको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश सदर गरेको हो । उच्च अदालत हेटौंडाले चितवन अदालतले सुनाएको विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने जस्ता शर्तहरु भने बदर गर्न आदेश गरेको हो।
उच्च अदालतकाे याे आदेशपछि लामिछानेले विदेश जान र कार्यक्रम चलाउन पाउने छन्। जिल्ला अदालत चितवनले लामिछानेलाई ५ लाख र सञ्चारकर्मी युवराज कडेँललाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत चितवनको आदेश विरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको हेटौंडा इजलाशमा दिएको निवेदनको दोस्रो सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलाशको यस्तो आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछानेले भदौ २३ गते निवेदन दिएका थिए। लामिछानले निवेदन दिएको भोलिपल्ट भदौ २४ गते सरकारी पक्ष पनि अदालत पुगेको थियो। दुवैको निवेदनमा उच्च अदालतले जिल्लाको फाइल मगाउने आदेश गरिसकेको छ। शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछाने ५ लाख, सञ्चारकर्मी युवराज कडेँल ३ लाख र अस्मिता कार्की साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।
अस्मिता कार्की रुकुको हकमा साधारण तारेखमा रिहा गरेको फैसला सदर गर्न उच्च अदालत हेटौंडाको आदेश छ । अस्मिताको पक्षमा अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ र केदार गुरागाईंले बहस गरेका थिए । पत्रकार पुडासैनीको गत साउन २० मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कस्थित होटल कंगारुमा श व भेटिएको थियो।
Posted on: Thursday, October 17, 2019 Time: 19:06:59
दुई श्रीमतीका श्रीमानसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी २२ वर्षीया स्वास्थ्यकर्मी तनुजा कार्कीले गरिन होटलमा देहत्याग
रुकुम काण्ड : मृतकका बुवा पहिलो पटक मिडियामा
-971 second ago